Toerana mahavariana akaiky any atsimon'ny tanàna afovoany, ny Camps Bay dia manana tantara lava toy ny fialamboly ho an'ny mpitsidika any Cape Town. Tamin'ny taonjato faha-19 sy tany am-piandohan'ny taonjato faha-20 dia tonga tany Camps Bay ny mpitsangatsanganana andro handehanana mitsangatsangana, milomano ao anaty dobo fandroana ary mankafy ny zavakanto mahavariana. Androany, malaza amin'ny tanàna afovoan-dranomasina tsara tarehy sy ny toerana eo anelanelan'ny Atlantika azota sy ny tampon'ny tendrombohitra roa ambin 'ny folo. Fihetseham-poko malaza ho an'ny olo-malaza sy ny endriny tena izy, ary feno trano fandraisam-bahiny 5 kintana sy trano fisakafoanana amoron-dranomasin'ny gourmet. Ireto ny zavatra tsara indrindra tokony hatao mandritra ny fijanonanao any Camps Bay.
Ario ny atmosfera ao amin'ny Camps Bay Beach
Ao amin'ny foibe ara-jeografika sy sosialin'ny Camps Bay dia misy ny Camps Bay Beach, toerana tsara indrindra any an-tanàn-dehibe izay hijery sy hita. Vovoka manga madio fasika madio avy amin'ny ranomasimbe ny faritra iray ary ny tendrombohitra iray kosa, nahazo ny lanjan'ny Blue Flag tamin'ny taona 2008. Mankanesa ao amin'ny toeram-pikomiana na manery ny rano mangatsiaka ao Atlantika; na mandehandeha eny amin'ny palmie-franjed boulevard miaraka amin'ny toeram-pisakafoanana, trano fisakafoanana ary fivarotana. Raha manapa-kevitra ny hilomano ianao, ataovy izay hijanonanao ao anatin'ireo faritra voatondro amin'ireo mpamonjy aina, satria samy mahery sy mahavariana avokoa ny onja sy ny onja. Miaraka amin'ny fahitana miankandrefana manerana ny ranomasina, ny Camps Bay Beach ihany koa no toerana faran'ny masoandro.
Mialà ao amin'ny Oudekraal
Amin'ny fahavaratra, ny Camps Bay Beach dia mety ho feno. Raha mitady fandriampahalemana kely sy mangina ianao dia miomàna 10 minitra eo amin'ny lalana Victoria Victoria mankany amoron-dranomasina Oudekraal. Raha vantany vao mialokaloka amin'ny andevo afa-nandositra, ny tora-pasika dia toerana lavitra tsy misy dikany ho an'ireo izay ao amin'ny fahalalana. Miaro amin'ny vato lehibe masiaka izy io, mamela ny rivotra madio sy ny rano mangatsiaka ho an'ny rivotra sy snorkeling. Rehefa feno ny fialan-tsasatrao ianao, dia hahita toerana feno alika kely miparitaka eny ambanin'ny hazo ravina mifanakaiky. Ento ny hena sy ny kitapo, ary mandany ny ambiny amin'ny tolakandro amin'ny fampiasana ny zavakanto afrikana Braai Atsimo.
Mofomamy amin'ny sakafo matsiro
Camps Bay dia fantatra amin'ny kalitaon'ny trano fialan-tsasatry ny seafood. Ho an'ireo traikefa ara-tsakafo tsy hay hadinoina, ataovy ny famandrihana sakafo fisakafoanana any Paranga. Miorina eo amoron'ny lakolosy Camps Bay, io toerana ambony io dia ahitana ny fomba fijery tsy mitongilana momba ny ranomasina izay mahafinaritra indrindra amin'ny latabatra trany. Ny sakafo dia mifantoka amin'ny seafood ary manasokajy ny sushi vao miomana. Raha mitady toerana mangatsiaka kokoa ianao, andramo ny Codfather Seafood & Sushi eo an-toerana. Manana kavina divay izy, koveta kanto amin'ny ririnina ary atrehan'ny fianakaviana. Ny zavatra iray tsy ananany? A menu. Ny mpividy mahafinaritra kosa no hitarika anao amin'ny alalan'ny fikarakarana marika vaovao isan-karazany.
Ny traikefa ambony vahiny afrikana tatsimo
Ny adihevitra malaza indrindra ao an-tanàna dia ilay Bay Hotel manan-tantara, safidy 5-star miaraka amin'ny toerana mahafinaritra eny amoron-dranomasina, sambo fiaramanidina efatra ary spa. Ny tena manokana, ny Sandy Beach Private Club Club dia iray amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra any an-tanàna. Raha ny tokony ho izy, Camps Bay Retreat dia safidin'ny boutique ho an'ireo manana fialan-tsasatra ao an-tsaina. Mipetraka ao amin'ny zaridaina maherin'ny efatra eo ho eo, ny toeram-pivarotana dia ahitana dobo fisaka sy toeram-pitsaboana. Ny trano fonenana dia Camps Bay Manampahaizana hafa, miaraka amin'ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny Primi Seacastle, karazana iray karazana 4 star ahitana efitra 10 tsy manam-paharoa. Mirehareha amin'ny endriny marokanina tsara tarehy izy ireo ary ny ankamaroany dia manana fomba fijery mampitolagaga.
Tsidiho ny Pipe Track
Ny mpilalao ara-batana sy ny mpankafy ny natiora dia tokony hanokana fotoana hijerena ny Pipe Track, lalana malaza iray izay manalavitra ny lalana avy any Kloof Nek (eo am-pototry ny Table Mountain ) mankany Camps Bay. Ny lalana dia manaraka ny fantsom-pitantanana efa natsangana ho an'ny rano avy any amin'ny Reniranon'i Disa mankany amin'ny foibe afovoan-tanàna. Etsy ankilany, dia mitazatazana mpihanika mankany andianà ranomasimbe sy hôpitaly tsy hay hadinoina; ary na dia tsy misy dikany aza ny tany dia tsy sarotra ho an'ny olona rehetra izany. Hatramin'ny fanombohana ka hatramin'ny farany, dia 6 kilometatra ny lavany. Mila adiny telo isaky ny mandeha an-tongotra izany; Fa raha te-handeha amin'ny làlana tokana ianao dia azonao atao ny mampiasa ny bus # 107 mba hahatongavana amin'ny laharana voalohany.
Mivarotra ao amin'ny Tobin'ny Camps Bay African Craft Market
Manao dia lavitra amin'ny lalana amoron-dranomasina eo anelanelan'ny Camps Bay sy Hout Bay mba hitadiavana ny Camps Bay amin'ny African Craft Market. Ity fisakafoanana misokatra ety ivelany ity dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra ao Cape Town mba hikarakarana ireo fahatsiarovana nentim-paharazana avy any amin'ny faritra Atsimon'i Afrika, anisan'izany ny sarivongana tanana vita sokitra, firavaka vita amin'ny jaky, akanjo vita amin'ny hoditra sy ny sisa. Ny vidiny dia ambany raha oharina amin'izay azonao antenaina hividianana entana toy izany ao an-tanàn-dehibe ao an-tanànan'i Cape Town, ary ny andrasana no andrasana. Misokatra isan'andro isan'andro mandritra ny ora maivana, ny tsena dia mendrika ihany ny mitsidika fotsiny ny hatsaran-tarehin'ny toerana misy azy - ka na dia tsy mikasa ny hividy zavatra aza ianao, dia atsaharo ny fanangonana ny rivotra.
Manàna fahafinaretana amin'ny (na ambany) ny rano
Ho an'ireo mpihira, ny Camps Bay dia mikasika an'i Glen Beach, izay mijanona mandritra ny 10 minitra manerana ny dongom-pasika avy any amoron-dranomasina. Fantatr'ireo mpihazo haingon-drivotra sy hara-borona, Glen Beach dia toerana fialantsasatra avo lenta - saingy tsy noho ny tsy fahampian'ny fo. Eritrereto ny rivo-mahery, ny rano mangatsiaka ary ny faritra indostrialy indraindray. Raha toa ianao ka eo ambany rano, dia misy toerana mahafinaritra manamorona ny sisintanin'ny manodidina. Camps Bay Reef dia manome tavy tsara tarehy sy kelpa ala, izay mipetraka amin'ny fiainana an-dranomasina mahavariana, anisan'izany ny antsantsa kisarisika sy ny shiarka. Mandritra izany fotoana izany, ny tora-pasika Oudekraal no teboka fidirana ho any amin'ny renirano malaza Antipolis .
Mifalia amin'ny alina ao an-tanàna
Aorian'ny fahamaizinana, ny Camps Bay dia lasa toerana fanangonana safidy ho an'ny olona mahafinaritra ao Cape Town. Manomboha ny takarivanao miaraka amin'ny cocktails amin'ny artifisialy ao amin'ny Café Caprice, toerana mahafinaritra indrindra any an'habakabaka ho an'ny olona-mijery ireo orinasan-tsambo eny amoron-dranomasina. Ny toeram-pisakafoanana Japoney Umi dia manintona vahoaka marobe any amin'ny toeram-pisakafoanana avo lenta; raha toa i Dizzys dia lavaka mangatsiatsiaka kokoa fantatra amin'ny siramamy vita amin'ny sambokely, pizza matevina ary fehivozana mivantana. Io farany io koa dia mandeha ho anao ho an'ny karaoke, ary mitsahatra hatramin'ny ora maro. Ho an'ny toerana avo lenta amin'ny kolontsaina avo lenta, dia manomboka amin'ny Theater theater on the Bay, trano fonenana feno zavakanto mazàna avy amin'ny mozika ary milalao komandy sy kabarety.
Toerana tsara indrindra amin'ny fivarotana Souvenir any Durban, Afrika Atsimo
Ny Tranom-bokin'ny Portfolio: Tolotra Afrikana Tatsimo Afrikana
Ny faritra tsara indrindra amin'ny vorona any amin'ny faritra Atsimo Andrefana
Torolàlana ho an'ny mpizaha tany Afrika Atsimo: zava-misy marina sy vaovao
Sakafo Afrikana Tatsimo: Inona ny Biltong?
Ny 4 Jolay ny Firework Shows amin'ny Tampa
Toerana tsara indrindra any Amsterdam ho an'ny Kitchen Dutch authentique
Ny 6 Best Rooftop Bars any Paris
Discounts ho an'ny zokiolona ao Dallas-Fort Worth Senior Citizens and Military Military
Torolalana ho an'ny Orange, France
Toro-hevitra tena ilaina ho an'ny faritra Malwa ao Madhya Pradesh
Mipetraha any amin'ny fisakafoanana any Meksika
Ny Fiarahamonina Tsara Indrindra ho an'ny Luminaria
Ny Lohasahan'ireo Mpanjaka, Ejipta: Ny Tari-dalana feno
Avy amin'ny lalana nidaroka an'i Oahu